Apple ee iPhone X qabataa Value khayr badan inta wax iPhone Previous - Shiinaha Gracebestbuy International
Apple ee iPhone X qabataa Value khayr badan inta wax iPhone Previous
Haddii aad raadineyso weeyna in la iibsado iPhone in qaban karto miraheeda, fiirin dheeraad ah lahayn ka badan Apple ee iPhone X.
Daraasad dhawaan, shirkadda badanoo B-Stock baaro taas oo iPhone sameeya shaqada ugu fiican ee ay miraheeda. iPhone X The soo baxay on top by xafidaada 85% of miraheeda asalka suuqa sare. Shirkadaha iibsan iPhone X ee bulk ka iibin dukaamada waxaa u helo 75% ka mid ah ay qiimaha tafaariiqda, B-Stock helay, sida uu sheegay 9to5Mac, kaas oo helay nuqul ka mid ah daraasadda.
Apple sii daayay ay iPhone X sannadkii la soo dhaafay iyada oo qiimaha tag ugu sareeya waxa uu abid sumadooda smartphone shirkad. saldhig iPhone X model The kharash $ 999 iyo version la kaydinta dheeraad ah oo ku dhaco, waayo, $ 1,149. data B-Stock ayaa soo jeedinaya iPhone X oo qiimihiisu yahay ugu yaraan $ 849,15 ee gadista.
Casriga ah ma caadi ahaan si fiican u qaban qiimahooda. Tilmaamo New, qaybaha hagaagay, oo kula tartamaya racfaan u muuqdaan in ay hoos u eryi ay qiimo weyn u. IPhone Apple ayaa sidoo kale laga badiyay qiimaha, laakiin waxa ay u muuqdaan ka khayr badan ugu kor. Sida laga soo xigtay 9to5Mac, xogta B-Stock ayaa soo jeedinaya iPhone X ayaa dhigay rikoor cusub oo loogu talagalay haysta miraheeda khayr badan inta wax kale iPhone suuqa.
Natiijooyinka waa news tahay fiican u leh shirkadaha in ay helaan iPhone used ama soo laabtay. Sidoo kale war wanaagsan u tahay qof kasta oo leh X iPhone ah oo qorshaynaysa in ay u celi, waayo, qalab cusub sanadkan. Haddii wax kale ma aha, waxay u tegi doonaa jidka dheer ee defraying kharashka iPhone cusub.
waqti Post: Jul-30-2018